उपराष्ट्रपतिले किन उद्घाटन गर्नुभएन भव्य तयारी गरिएको शुभलक्ष्मी अस्पताल ? - Paschimnepal.com
उपराष्ट्रपतिले किन उद्घाटन गर्नुभएन भव्य तयारी गरिएको शुभलक्ष्मी अस्पताल ?
कर्णालीले पर्यटनबाटै लाभ लिन सक्नुपर्छ ः उपराष्ट्रपति
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशले पर्यटन क्षेत्रबाटै लाभ लिन सक्ने उपराष्ट्रपति नन्दबहादुुर पुनले बताउनुभएको छ । सुर्खेतका पर्यटकीय स्थलहरु कांक्रेविहार र बुलबुले उद्यानको आज अवलोकन गर्दै उहाँले पर्यटन प्रर्वद्धन गर्न सके कर्णालीले मुहार पर्ने बताउनुभएको हो ।
उपराष्ट्रपति पुनले खस भाषाको उत्पत्तिस्थल जुम्लाको सिंजा उपत्यकालाई कांक्रेविहारसंग जोडेर पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । “सिंजाको महत्वबारे विभिन्न मुलुकमा बसोबास गर्ने नेपालीभाषीलाई बुझाउन जरुरी छ, सिंजा क्षेत्रले जति महत्व पाउनुपर्ने पर्ने त्यति पाएको छैन्,” उहाँले भन्नुभयो, “कम्तीमा कर्णालीका मुख्य गन्तव्यस्थलहरु रारा, सिंजा र कांक्रेविहारलाई जोडेर पर्यटन प्रर्वद्धन गर्न सके भविष्यमा उचित लाभ पाउन सक्छौं ।”
उहाँले संसारको जुनसुकै कुनामा बसोबास गर्ने नेपालीभाषी भएपनि कम्तीमा एकपटक आफ्नो भाषाको उत्पत्तिस्थल सिंजा क्षेत्रको भ्रमण गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उपराष्ट्रपति पुनसंगै कर्णालीका प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनाल, आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले कांक्रेविहार र बुलबुले उद्यान क्षेत्रको अवलोकन गर्नुभएको थियो ।
कांक्रेविहारमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले पञ्चेबाजासहित उपराष्ट्रपतिको स्वागत गरेको थियो । नगर उपप्रमुख मोहनमाया ढकाल, वडाध्यक्ष सुरेश मानन्धरले कांक्रेविहारको विकासको अवस्था र ऐतिहासिक पक्षका बारेमा उपराष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । उपराष्ट्रपति पुनले शुक्रबार सिंजा महोत्सवको उद्घाटन र हुम्लामा एक विद्यालयको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम छ ।
पूर्वाधार अपुग भएपछि उद्घाटन रद्द
उहाँले आज वीरेन्द्रनगर खजुरास्थित एक निजी शुभलक्ष्मी कलेज अफ हेल्थ साइन्सको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रमको तयारी भएपनि अन्तिम समयमा रद्द गर्नुभयो । अस्पताल सञ्चालनको पूर्वाधार नपुगेको सूचनाका आधारमा उद्घाटन समारोहमा सहभागी नभएको उपराष्ट्रपतिको सचिवालयले जनायो ।
सबैकाे सुझावमा केही तयारीहरु अपुग भएकाले अस्पतालकाे उद्घाटन हुन सकेन नीजि सचिवालय स्राेतले भन्याे, ‘सबै तयारी पूरा गरेर प्रदेशकै मन्त्रीले उद्घाटन गर्दा हुन्छ ।’
प्रकाशित मितिः बिहिबार, कार्तिक ७, २०७६ 6:20:11 PM
Prevकुन ठाउँमा भाइटीकाको साइत कति बजे ?
Nextकेन्द्रकै भर परे कर्णालीको विकास असम्भव ः मुख्यमन्त्री शाही